By ဟယ်လ်သင် 18 February 2020
Shazam! မှာ ဗီလိန်တွေ တစုတဝေးထဲ တွေ့မြင်လိုက်ရချိန်ဟာ အတော့်ကို နည်းပါးပြီး နောက်ထပ် ထွက်ရှိလာမယ့် The Rock အဓိကသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ Black Adam ရုပ်ရှင်မှာ Seven Deadly Sins အဖြစ် လူသိများတဲ့ DC ရဲ့ နာမည်ကျော် ဗီလိန်တွေကို ထပ်မံမြင်တွေ့ရဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
Dwayne Johnson အနေနဲ့ Black Adam အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ဖွင့်ဟလိုက်ကတည်းက DC ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုပုံစံဟာ တဆင့်ထက်တဆင့် ပိုပိုမြင့်တက်လာခဲ့နေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Shazam! ရုပ်ရှင် ပြသခဲ့ပြီးတုန်းကလည်း အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Black Adam ရုပ်ရှင်ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ထွက်ရှိလာဖို့ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီး DC ရဲ့ ရုပ်လုံးကို ထပ်လောင်း ပီပြင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DC အနေနဲ့ကတော့ Black Adam ကို Horror-comedy အမျိုးအစား ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတင်ဆက်ပုံနဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ ရောက်ရှိလာဖို့ အချိန်ဟာလည်း သိပ်မကြာတော့ပါဘူး။ Seven Deadly Sins ဗီလိန်တွေကို Black Adam နဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံစေမယ့် ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်မှုပုံစံ အသေးစိတ်ကိုတော့ အခုအချိန်အထိ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
Shazam! ရုပ်ရှင်မှာတုန်းကတော့ မှော်ကြေးမုံပြင်ထဲ ပြသခဲ့ပုံကတော့ Black Adam ဟာ Seven Deadly Sins ကို လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမောက်ကမ အခြေအနေနဲ့ ပျက်စီးခြင်းတွေကို ဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
DC ရဲ့ နာမည်ကျော်ဗီလိန်တွေဖြစ်တာနဲ့အညီ Shazam! ကိုယ်တိုင်လည်း သူ့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ သူရထားတဲ့ စွမ်းအင်ကို မျှဝေပေးပြီးမှ တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Black Adam သာ အကယ်၍ Seven Deadly Sins နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Dwayne Johnson ရဲ့ “Black Adam” ရုပ်ရှင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရိုက်ကူးရေး စတင်မယ်
Topics: Black Adam, Shazam!, ဗီလိန်